(Last Nohavaozina: 26/03/2020)
Venice dia iray amin'ireo tena manome aingam-panahy sy ny tanàna mahagaga tany Italia ary mora lamasinina. Amin'ny alalan'ny fitsidihana Venice nandritra ny Paka fety, dia afaka mankafy ny lohataona mahafinaritra Weather. Izany dia mamela anao mandany ny tontolo andro any an-tokotany. Nandeha tany amin'ny foibe manan-tantara eo amin'ny rano, ento any amin'ny tsara tarehy toerana manodidina na sample ny sakafo matsiro an'i Venise ho an'ny fitsaharana Paska tonga lafatra. Toy izao ny fomba hahazoana an'i Venise lamasinina ho an'ny Paska.
Venise no voahodidina rano fa mifandray tsara amin'ny tanibe sy ny sisa eto an-tany izy noho izany lalamby mahomby. Nandritra ny taona maro Venise nandritra ny fety Paska dia lasa bebe kokoa malaza, ary Matetika airlines hampitombo ny vidiny noho izany fangatahana. Na izany aza, fiarandalamby mihazakazaka tsy tapaka ho any Venice, Ka ny mpandeha dia afaka mandray sidina mora vidina mankany Milan na Treviso ary avy eo, handray ny fiaran-dalamby ho any Venice.
Dia tena mora ny mahazo ny Venice nandritra ny fiatoana Paska lamasinina. ny tena gara, Venezia Santa Lucia dia manome anao fidirana amin'ny toerana rehetra eo afovoan-tanàna an-tongotra na amin'ny alàlan'ny rano. Io gara foibe mampifandray ny tanàna maro hafa firenena sy ny tanàna italiana.
Safidy iray hafa tsara dia ny mankany amin'ny gara any Venezia-Mestre. Ity no voalohany gara izay hitanao eo anoloanareo hamaky ny tetezana fa ny tsara tarehy sakan'ny Lagoon. Ny tobin'i Venezia-Mestre dia azo aleha amin'ny tanàna akaiky rehetra amin'ny lamasinina.
Book tany am-boalohany – Venise amin'ny lamasinina ho an'ny Paska
Events ary ny fankalazana dia atao mandritra ny fetin'ny Paska any Venise. Zava-dehibe ny drafitra sy ny Bokin'i ny fiaran-dalamby mialoha.
Efa anao nankalaza ny Paska tany Venise talohan'ny? Ampahafantaro anay ny zavatra niainanao tamin'ny alàlan'ny bitsika anay tao @SaveATrain! ary Tsidiho ny anay an-tserasera izay hijery manokana ny manjo rehetra sy ny manaraka manomboka mieritreritra traikefa nahafinaritra!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-get-to-venice-by-train-for-easter%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Paka fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel travelvenice